Iwo akanakisa akachipa ekofi michina ye2022 - Kutenga gwara uye zvinopihwa
vagadziri vekofi vakachipa
Michina yakanaka yekofi
Mhando dzemichina yekofi
Capsule kofi michina
Super otomatiki kofi michina
Michina yekofi yekuItaly
drip vagadziri vekofi
magetsi ekugadzira kofi
plunger vagadziri vekofi
Cona vagadziri vekofi
Yakavakwa-mukati kofi vagadziri
Maindasitiri ekofi michina
kofi maker brand
kofi uye accessories
barista kofi accessories
Matipi uye mazano
kuchenesa mugadziri wekofi
Gadzirira cappuccino yakanaka
Cold Brew kana Iced Kofi
Shandisa muiti wekofi yekuItaly zvakanaka
Ita kofi pasina muiti wekofi
kofi ipi yekutenga
Zvishandiso uye nezvimwe
Kana iwe uchida kofi (uye mamwe infusions) uye uri kufunga nezvazvo sarudza yakanaka yekugadzira kofi izvo zvinosangana nezvido zvako unozoziva kuti kazhinji hazvisi nyore nekuda kwemhando dzakasiyana siyana dziripo pamusika. Uye kana zvatove zvakaoma kusarudza rudzi rwemuiti wekofi, zvichiri kuoma kufamba pakati pehuwandu hwemhando dzakasiyana-siyana uye mienzaniso iripo.
Kune vashandisi vasina kusarudzwa, pane ino webhusaiti tichaedza kukudzidzisa zvese zvaunoda kuziva kuti iwe ugone kusarudza kuti ndeupi rudzi rwemugadziri wekofi waunoda zvinoenderana nezvaunoda, uyezve, ndeapi mabhureki uye mamodheru anokurudzirwa mune imwe neimwe nyaya. kuti unowana chigadzirwa chakanakisisa pachiitiko chimwe nechimwe. Pamusoro pezvo, izvi zvinokutadzisa kushandisa mari yakawandisa, kuve nechokwadi chekuti uri kubhadhara mutengo wakanaka wechigadzirwa chemhando.
Iyo yakanakisa kofi michina pamusika
Kana iwe usingade kuzviomesera zvakanyanya kana iwe uchitova neimwe pfungwa, pamwe unongoda kuziva kuti ndeipi michina yekofi yakanaka kunze uko kusarudza yako. Sepfupiso uye pasina kusarura nemhando, izvi ndizvo pamusoro pemichina yedu yatinoda kofi:
Bosch Tassimo Anofara...
Mhando dzemichina yekofi: ndeipi yakanaka?
Ikoko hakusi rudzi rumwe chete rwemuiti wekofi, kana zvisina kudaro sarudzo yaizova nyore zvikuru. Pane zvitsva michina yemagetsi izvo zvakashanduka kuti zvipe zvakanakisa mhedzisiro uye nyaradzo huru, pasina kubvisa zvachose iyo mapoto ekofi echinyakare. Nechikonzero ichi, nhasi kune ese ari maviri ekare ekofi michina yeakanyanya purists, pamwe neazvino azvino.
Nyatsozivana navo mhando dziripo dzemichina yekofi Izvo zvakakosha kuti uzive nzira yekusarudza yakanakisa coffee maker zvinoenderana nezvauri kutsvaga chaizvo. Tinokuudza mumashoko mashoma pano:
ari magetsi ekugadzira kofi ndeaya ese akatsiva ekunze kupisa masosi nemagetsi ekudziya masisitimu ekugadzira kofi kana infusions. Rudzi urwu rwemugadziri wekofi nekukurumidza uye zvakanyanya kushanda kudzimba zhinji. Pamusoro pezvo, hazvidi kucheneswa kana kugadziridzwa zvinonetesa sezvichivanhu. Muboka iri unogona kuwana:
Capsule kofi michina: ndidzo dziripo parizvino, nekuti dziri nyore kushandisa uye nekukurumidza. Iwe unongosarudza capsule yekofi kana infusion yaunoda kugadzirira (zvimwe zvinokutendera kuti ugadzirire zvinopisa uye zvinotonhora zvinwiwa), zviise mumushini, uye mumasekonzi mashoma unenge wagadzirira girazi rako kana kapu. Yayo yekumanikidza sisitimu inopfuudza mvura inopisa kuburikidza nekapisi kuti ibvise kunaka uye kunhuhwirira kwezviri mukati uye inoiburitsa mugirazi / kapu.
Super otomatiki kofi michina: michina iyi inokubvumira kuti usarudze bhinzi yekofi kana kofi yakasvibirira (inopa rusununguko rukuru nekusaenderana nemhando ye capsule yakatsigirwa), asi haidi kutariswa kwakawanda sekutanga. Ivo vanowanzo miswa panguva chaiyo, pasina iwe kuti uvamise iwe pachako nekuda kweiyo system inoziva kuti yakawanda sei yekuita. Mukuwedzera, ivo vanowanzove nemamwe mabasa ekuwedzera maererano neaya apfuura.
Manual espresso michina: Kusiyana ne-super-otomatiki avo, havana grinder uye maitiro ekutanga uye kudzvanya kofi inofanira kuitwa nemaoko. Vamwe vane yakavakirwa-mukati chishongedzo kuti vaporize, ndiko kuti, kukubvumidza iwe kuti ugadzire iwo mukaka furo uye upe kofi iyo yakakosha magadzirirwo ehunyanzvi.
Yakavakwa-mukati kofi vagadziri: anowanzo ari super-otomatiki makofi muchina, chete iwo akavakirwa-mukati mukicheni senge zvimwe midziyo, sezvazvinogona kuitwa nemichina yekuwachisa, madhishi, ovheni, microwaves, nezvimwe.
Drip kana vagadziri vekofi vekuAmerica: Aya ndiwo emagetsi emagetsi ekofi machina anoshandisa anoraswa mafirita uye yemagetsi kupisa sosi. Iwe unogona kushandisa chero kofi yepasi yaunoda. Muchina uyu unopfuudza mvura inopisa kuburikidza nekofi yepasi uye woisefa kuti idonhedze mhedzisiro mujagi yakabatanidzwa. Muchiitiko ichi, havasi monodose. Zvimwe zvinosanganisira thermos jug, saka vanochengeta kofi ichipisa kwemaawa mashoma.
Vagadziri vekofi yemagetsi yekuItaly: zvakafanana muchitarisiko uye kushanda kumachina ekofi ekuItaly kana manyorero eMoka pots, asi anofambiswa nemagetsi sosi. Ramba uchifunga kuti michina yekofi yakawanda yekuItaly haitsigire induction cookers, nekudaro kuvepo kweiyo yemagetsi vhezheni.
mapoto ekofi echinyakare
Ndivo avo vanoramba vachitsamira pane kunze kwekupisa sosi. Dzakagadzirwa makore apfuura uye dzichiripo nanhasi. Vazhinji vanoda kofi vanosarudza kuenderera mberi nekugadzirira kofi yavo mumhando iyi yemuchina wekofi, vachidzora zvese kubva pakutanga uye kuita "tsika" yese kusvika vawana kofi yavo yakakwana. Izvi zvinoreva kuti ivo havana kukurumidza uye vanoda manyorerwo maitiro, saka ivo havasi vemunhu wese. Pakati pavo, munhu anogona kusiyanisa pakati:
Michina yekofi yekuItaly: iwo ari nyore kwazvo makofi michina ine tangi remvura munzvimbo yepasi. Iyi dhipoziti ndiyo inoiswa mundiro kuti ichidziya uye kuti mvura ifashaire. Saka inokwira mukoto uye inopfuura nepasefa panowanikwa kofi yepasi. Inobvisa kunhuhwirira kwayo uye inokwira yatosefa kutangi riri kumusoro.
plunger vagadziri vekofi: Mune plunger kofi maker inobvumirwa kugadzira kofi uye chero imwe infusion. Iwe unofanirwa kupisa mvura kuvira mumicrowave kana mupoto, wobva wawedzera mukati memugadziri wekofi pamwe chete nezvaunoda kupinza. Iwe unovhara chivharo uye sunda iyo plunger kuitira kuti mvura ine flavour ipfuure nepasefa yako uye nekudaro inosiya nzvimbo pazasi.
Cona kana vacuum vagadziri vekofi: Imhando yakasarudzika yekugadzira kofi iyo yakagadzirwa makore mazhinji apfuura. Kushanda kwayo, muchidimbu, kwakafanana nemusimboti weItaly. Uyu mugadziri wekofi anoshandisa chitubu chekupisa chekunze, semoto kana kupisa kupisa mvura mumudziyo wayo wepasi, iyo inowedzera gasi uye inoita kuti ikwire kunzvimbo yepamusoro kuburikidza nemukoto unobatanidza zvikamu zvose. Ikoko ndiko uko kofi inofanira kuiswa. Kana ichinge yabviswa kubva pakupisa, mhepo iri munzvimbo yakaderera inobvumirana uye inoita vacuum effect, ichisveta kofi kubva munzvimbo yepamusoro kuburikidza nesefa. Mhedzisiro yekupedzisira ichava yakagadzirira-kunwa kofi pasi, ichisiya nzvimbo dziri kumusoro.
Pakupedzisira, iyo maindasitiri ekofi michina Iwo iboka rakaparadzana. Kazhinji, vanogona kubatanidzwa mumagetsi emagetsi, sezvo vachishanda nemagetsi ekupisa. Asi inodhura, michina mikuru ine hunyanzvi hwepamusoro. Izvi zvinokutendera kuti uite kofi nekukurumidza uye kunyange kugadzira makofi akati wandei panguva imwe chete mune dzimwe nguva. Iwo akakodzera mabhizinesi ekugamuchira vaenzi akadai semakofi, mabara, maresitorendi, mahotera, nezvimwe, kunyangwe paine vazhinji vanozvitenga kuti vashandise kumba.
vanogadzira kofi vanonyanya kutengesa
Kuenderera mberi nezvakataurwa kusvika pari zvino, izvi ndezvimwe zve vagadziri vekofi vakanakisa kuti iwe unogona kutenga gore rino neyakanakisa kukosha kwemari, vatungamiriri mumapoka avo zvichienderana nemhando dzevagadziri vekofi vatakatotsanangura:
De'Longhi akagadzira imwe yeakanakisa kofi michina ye Dolce Gusto capsules kuti unogona kuwana Iine simba re1500w uye inokurumidza kudziyisa sisitimu saka haufanirwe kumirira kweminiti imwe chete kuti kofi yako igadzirire paunonzwa kuifarira. Nemabhawa ayo gumi neshanu ekumanikidza iwe unogona kubvisa zvese zvakanakisa kubva mukofi kana infusion capsule kuti upe yakanakisa kunaka kunobvira.
Mukuwedzera, inobatanidza 0,8-litre yemvura tangi yemvura, iyo ichakubvumira kuti uite makofi akawanda pasina kuizadza zvakare. Inomira kunze kwemabasa anonakidza, akadai gadzira zvinwiwa zvinopisa kana zvinotonhora, kuchengetedza kuri nyore kupfuura kare kuvonga kwatiri inoyambira kana yave nguva yekudzika.
Mugadziri weItaly wemashini ekofi akatarisira kugadzirwa kwemuchina uyu, ane ruzivo musimbi isina tsvina uye chimiro chinoshongedza nzvimbo yaunoisa mudziyo uyu. Zvinosanganisirawo kuyerera-kumisa basa kumisa jeti otomatiki, kuzvigadzirisa kudonhedza tireyi kune ese marudzi emakapu nemagirazi, otomatiki kudzima mushure me5 maminetsi ekusaita, nezvimwe.
Mugadziri anozivikanwa Krups akagadzira imwe yeakanakisa makofi michina ye nespresso capsules kuti iwe unogona kuwana mumusika nemutengo wakachipa. Yakanyanya kunyaradza mune iyi compact uye lightweight muchina, ine ergonomic mubato uye inoyevedza ruvara.
Iine bhatani rekuibatidza, uye mune chete 25 seconds Ichave yakagadzirira uye nemvura pane tembiricha yakakodzera kugadzirira yakanakisa kofi. Zvese zvakadyiswa ne0.7 litre capacity tank, ine cup size kugadzirisa nemabhatani ayo (Espresso neLungo), kwenguva pfupi kana kureba.
Simba rawo nedzvinyiriro 19 bara Vanovimbisa kuti iwe unogona kubvisa zvose kunhuhwirira kwebhinzi yekofi pasi kubva kuma capsules, pamwe chete nezvinhu zvinotarisirwa kubva mukapu yakanaka yekofi. Dzvinyiriro ine zvishoma zvekuitira shanje michina yekofi yehunyanzvi.
Mukuwedzera, izvo zvave anti-drip system, uye otomatiki shutdown system kana ukaisiya usina kuishandisa kweanopfuura 9 min.
Kana iwe uchida iyo Tassimo capsules, mugadziri Bosch anopawo imwe yeakanakisa capsule kofi michina yeiyi consumable firm. 1400w yesimba, 0.7 litre tank, uye compact uye inoyevedza dhizaini inozadzisa muchina uyu kupinza.
Nayo unogona kunakidzwa nekunaka kwekusarudzwa kwe zvinopfuura makumi mana zvinwiwa kupisa nekunaka kwese kwekutanga. Hapana zvigadziriso zvakaoma, ingo sarudza iyo capsule yaunoda, tinya bhatani uye mirira kuti kapu yako kana girazi rive rakagadzirira (nerutsigiro rwunochinjika rwehukuru hwakasiyana).
Uye kuchengeta muiti wekofi yakachena uye kuti zvinonaka hazvisanganise, mushure mekushandisa kwega kwega mugadziri wekofi ane dhizaini yekuchenesa dhizaini yekuisiya nekukurumidza kugadzirira kunwa kwakasiyana.
Imwe yemhando huru dzeEurope ndiPhilips. Panguva ino ane muenzaniso wemugadziri wekofi senseo capsules kuti uchada Inowanikwa neyakagadziridzwa dhizaini uye muhuwandu hwemavara kuti usarudze akanyatsokodzera zvinoenderana nezvaunofarira.
Iyo yakasarudzika mugadziri wekofi, nekuti kunyangwe iri imwe-dosi inobvumidza iwe kugadzirira makapu maviri ekofi panguva imwe chete. Zvese nekukurumidza uye zviri nyore, kusarudza kusimba kweiyo refu, yakapfava, pfupi uye yakasimba kofi yaunoda chero nguva uye kumirira mhedzisiro.
La Kofi Boost tekinoroji inova nechokwadi chekubvisa zvese zvinonaka zvekapisi imwe neimwe nekumanikidza kwayo, ichivimbisa kunaka kuri nani. Pamusoro pezvo, tekinoroji yeCrema Plus inovimbisa kuti crema layer yakanaka uye ine manyorerwo ari nani pane mune mamwe mashini emagetsi ekofi. Uye kana ukasaishandisa, tekinoroji yayo inochengetedza simba inozodzima mumaminitsi makumi matatu.
Oroley Ndiyo imwe yemhando dzakanakisa dzaungatenga dzerudzi urwu Italian coffee vagadziri. Vanhu vazhinji vanosarudza kugadzirira kofi nemhando iyi yemugadziri wekofi yechinyakare nekuti vanoti vanoda kunaka kwayo zvirinani. Vakadarowo yakasimba uye yakachipa.
Is yakagadzirwa nealuminium, uye inokodzera mhando dzese dzekicheni, kunze kwekunge induction. Tangi yaro yemvura inokwana makapu gumi nemaviri, kunyangwe paine masaizi akasiyana siyana ekuvhara zvinodiwa zvakasiyana. Inosanganisirawo vharafu yekuchengetedza kudzivirira njodzi.
A yechokwadi classic kunakidzwa nekofi nenzira yechinyakare, kuteerera kugutsurira uye kufema kunhuhwirira kwayo. Haikwanise kushaikwa mumba mako uye nekuwedzera pakugadzirira kofi inonaka, Michina yekofi yekuItaly inowedzera kubata kwakasiyana izvo hazvizoendi zvisina kucherechedzwa uye zvinopa hunhu hwakawanda kukicheni yako.
Kana uchida imwe super automatic coffee maker, imwe yeakanakisa yauchawana iItari De'Longhi Ecam Magnifica, ine 15 bar pressure, 1450w simba, inobviswa 1.8 litre capacity tank yemvura, LCD panel yekuona ruzivo, cappuccino system, inogadziriswa kofi dispenser yehukuru hwakasiyana, uye kuchenesa otomatiki.
Pasina kupokana, iyi ndeimwe yepamusoro-yekupedzisira kofi michina. Huwandu hwemabasa hwaunounza hunoshamisa uye kupera kwekofi kunongonaka. kofi ichangobva kukuyiwa nekuda kwayo otomatiki grinder kumusoro uye yepamusoro nhanho kana zvasvika personalize kofi yako.
Uyu mugadziri wekofi wepamba anopa nezve zvehunyanzvi mhedzisiro kuti iwe uchada kana iwe uri mudi wekofi yakanaka. Mukuwedzera, inokubvumira kugadzirira makapu maviri ekofi panguva imwe chete. Uye nekusaenderana ne capsules, zvinokubvumira kuti usarudze kofi yaunonyanya kufarira.
Iyo yakasimba De'Longhi inopawo imwe yakanaka kwazvo modhi kana uri kutsvaga yakanaka ruoko mugadziri wekofi zvekumba. Nemugadziri wekofi uyu uchawana makofi anonaka nekuda kwesimba raanopa re1350 W uye nekudzvanywa kwayo kwepamusoro nekuda kwepombi yayo ye15 cm yakatetepa.
Inobatanidza Thermoblock system kupisa mvura kune tembiricha chaiyo mumasekonzi makumi matatu nemashanu chete. Inoshanda nechero kofi yakabikwa uye ne "Easy Serving Espresso" mapodhi, kukupa rusununguko rwakakura pakusarudza chigadzirwa. Zvakare, chimwe chezvinonyanya kukosha ndezvako ruoko rune 360º kutenderera "capuccinatore" kuti uwane yakanakisa mukaka furo uye cappuccinos sekunge iwe uri nyanzvi barista.
Kubheja kwakachengeteka ne imwe yezvakanakisa kukosha kwemari yakagadzirirwa vanhu vose vanofarira nzira yekugadzirira kofi.
Pakati peakanakisa kutengesa otomatiki kofi michina ndeye Oster Prima Latte, sezvo iine mutengo wakagadziridzwa wezvainopa chaizvo. anogona kugadzirira zvinonaka cappuccinos, lattes, espressos, pamwe nemukaka unopisa kuwana furo rakanaka.
Iwo ngano muchina we espresso, favourite yemawebhusaiti mazhinji uye vanoda kofi nokuda kwekunaka kwainopa pamutengo wakaderera zvikuru pane mamwe machina anodhura.
Ine tangi remvura 1.5 litita chinzvimbo, neimwe yakawedzera 300 ml mukaka tangi. Inogona kupisa nekukurumidza nekuda kwayo 1238 W yesimba.
Muridzi a Pressure ye 19 bara kuburitsa iyo yakanyanya kubva mukofi, zvakare ichipa yakawanda creaminess kune mhedzisiro. Uye zviri nyore kwazvo kuchenesa, uye kunyange kukubvumira kubvisa tangi yemukaka kuti uichengete mufiriji.
Kune yechipiri vhezheni yemuchina, iyo Oster Prima Latte II, ine simba rakakura uye kugona, uye kunyangwe purists vachiri kuda yepakutanga, ichiri kubheja kunonakidza.
Uyu Cecotec yemagetsi kofi inogadzira Icho chimwe chezvinonyanya kufadza mukati merudzi urwu. Iyo ine mukurumbira mugadziri wemarobhoti epamba anoitawo michina yekofi ine dhizaini inoyevedza, compact, uye kuwana mibairo yakanaka kwazvo kana ichienzaniswa neayo anokwikwidza.
Iyo ine simba re 1350w kupisa mvura yekuputira, Thermoblock kuti iite nekukurumidza, 20 bara yekumanikidza kuwana kirimu yakanakisa uye kunhuhwirira kwakanyanya semichina yekofi yehunyanzvi, inosanganisira chibatiso chekugadzira mukaka uye kuwana furo rakanakisa, inobvumira mvura inopisa kuti ibudiswe kugadzirira infusions, 1.2-litre inokwana tank, uye anti-drip system.
Melitta Tarisa Therm Deluxe
Kana iwe uri mumwe weavo vanosarudza Vagadziri vekofi yekuAmerica kana yekudonha, Melitta yeGermany ndeimwe yezvakanakisisa zvaunogona kutenga. Iyo yemagetsi sefa kofi inogadzira, ine simba re1000w (inoshanda kirasi A), inokwana 1.25 litres, uye yakagadzirwa nesimbi isina tsvina.
Inonaka uye inonhuhwirira yakareba kana mapfupi makapu ekofi yekusarudza kubva, ine thermos inogona kuchengetedza kofi ichipisa kwemaawa maviri nekuda kweiyo isothermal insulation yejagi yayo. Iyo inosanganisirawo chivharo, anti-drip sefa inobata, inoenderana ne2 × 1 mafirita, mubato, descaling purogiramu, kuoma kwemvura kugadzirisa, uye yakachengeteka dishwasher.
Melitta Tarisa Therm Deluxe...
Ndicho chinhu chaicho Cona coffee maker, kana vacuum. Kune mamwe akawanda akafanana pamusika anoedza kuitevedzera, asi iyi ndiyo chete inochengetedza dhizaini yepakutanga yemugadziri wekofi yechinyakare, pamwe nehuchokwadi hwayo, sezvo ichiri kugadzirwa nekambani yeCona.
Yakagadzirwa muEurope, ine midziyo miviri ye borosilicate girazi inopesana nekuvhundutsa kwekupisa uye neiyo yechokwadi sisitimu iyo inoburitsa zvese kunhuhwirira uye zvimiro zvekofi nekuda kwevacuum suction athari inoiratidzira.
Kuve nemugadziri wekofi yeCona ibhizinesi rakakura, mhando yose yemaitiro uye hunhu. Ndosaka tichikurudzira kuti utize kubva pakutevedzera uye utsvage iyo yekutanga Cona. Mutengo waro wakakwira, asi chitambi hachichinji.
Kana iwe uchida kushandisa iyo plunger vagadziri vekofi, iyo Bodum ndeimwe yeakanakisa uye yakachipa yaunogona kutenga. Mugadziri wekofi uyu ane chigadziko chegirazi che borosilicate chakasimba, kugona kugadzirira makapu masere panguva, uye plunger ine yakabatanidzwa sefa.
Pisa mvura kusvika yavira, wedzera kofi yepasi kana infusion yaunoda kugadzirira kune mugadziri wekofi, rega inyise uye tinya plunger kuti. sefa zvikonzero zvose uye uvasiye vakasungwa kumashure. Nenzira iyi uchawana chinwiwa chako ipapo ipapo.
Rudzi urwu rwemugadziri wekofi ruchayeuchidza kupfuura imwe yeambuya nasekuru vako, uye ndizvo sarudzo yakachipa, inogoneka, iri nyore kutakura uye izvo zvinoshandawo kugadzira infusions emarudzi ese.
Lelit ndomumwe wevane mukurumbira vagadziri veotomatiki kofi michina zveindasitiri hoteler. Iine nyore kuchenesa simbi isina tsvina, yakasanganiswa yekofi bhinzi grinder, yakakura tangi yemvura 3.5 litre, 1200 W yesimba, uye yakanyanya kudzvanywa system.
Iine 3-nzira vharafu yekuomesa hupfu hwekofi, boka remisoro kugadzirira kofi imwe panguva, uye kettle yendarira. Inopindirana nebhinzi dzekofi, pasi kofi, uye zvakare mapodhi ekofi. Mukuwedzera, inosanganisira hurongwa hwekuputira uye kugadzira furo rakanaka.
Sezvinoratidzwa nemhando yacho, mugadziri wekofi "chete kune vanoda kofi": zvachose yakagadzirwa nesimbi, kupedzisa kunoshamisa uye mabasa ayo ari pakukwirira kwevarimi vekofi vanonyanya kudiwa.
Nzira yekusarudza muiti wekofi: nhanho nhanho pfupiso
Kana zvichiita kwauri kuti zvinhu zvakaoma, isu tichaedza kurerutsa maitiro e kusarudza kuti ndeupi mugadziri wekofi kutenga. Chinhu chekutanga chaunofanirwa kuchengeta mupfungwa ndicho chauri kutsvaga kuti uzive zvaunoda. Chimwe chinhu chinoita sezviri pachena, asi izvo hazvisi nyore mukuita. funga zvino nezvazvo sarudza rudzi rwemuripo waunoda kugadzirira poto yako yekofi yeramangwana:
Kofi chete: iwe unofanirwa kusarudza pakati peimwe yeNespresso, Senseo, Italian, inosanganiswa, ruoko, super-otomatiki, drip kana American, Cona, uye maindasitiri capsules (kana ari ebhizinesi). Mukati meizvi, unogona kuderedza mikana inoenderana nekuti iwe unoda kuwedzera kana kushoma kunyaradza:
Automático: Nespresso capsules, Senseo, inogoneka, ruoko, super-otomatiki.
manyuwari: kudonha kana American, Cona, kana maindasitiri.
Mamwe infusions (tii, chamomile, lemon balm, valerian, ...): Iwe unofanirwa kusarudza pakati peDolce-Gusto, Tassimo, kana plunger mugadziri wekofi. Sezvakaitika mune yakapfuura, iwe unogona kudzikisira pasi mikana zvakanyanya:
Automático: kubva kuDolce-Gusto kana Tassimo capsules.
Paunenge wanyatsojeka nezve rudzi rwemuchina kana mugadziri wekofi waunoda zvinoenderana nezvaunoda kugadzirira, unogona kuona dhayagiramu inotevera kuti uone kuti ndedzipi misiyano yemhando imwe neimwe yemuiti wekofi, uye saka pedzisa kusarudza imwe chaiyo:
ye capsules: nekukurumidza, nyore uye inoshanda.
Nespresso: chigumisiro ikhofi yakanyanyisa, ine muviri wakanaka kwazvo uye kunhuhwirira, pamwe chete nekugadzirwa kwakakodzera. Iyo capsules yakanyanya kuderera kana ichienzaniswa neDolce-Gusto kana Tassimo, sezvo iwe uchingowana kofi, yemhando dzakasiyana, asi izvo chete.
Dolce GustoPairing: kofi yakanyanyisa, kunhuhwirira kwakanaka, furo rakanaka uye magadzirirwo. Nemhando dzakasiyana-siyana dzekofi capsules dzemhando dzakasiyana-siyana (espresso, mavara, akachekwa, decaffeinated, ...), pamwe chete nemukaka chai, tei inotonhorera, uye zvimwe zvinopisa uye zvinotonhora.
Tassimo: Kunyangwe mhando yacho isina kukwira semaviri apfuura, inopa mhedzisiro yakafanana. Mukuwedzera, macapsules aunogona kuwana akasiyana zvakanyanya, sezvakaita Dolce-Gusto. Kubva kune zvakasiyana-siyana zvekofi kusvika kune infusions uye zvimwe zvinozivikanwa zvepati zvinwiwa. Neanopfuura makumi mana emhando dzakasiyana, ndiyo imwe yeakanakisa sarudzo kana iwe uchitsvaga akasiyana pane zvese zvimwe.
Senseo: zvinoitika seNespresso, zvakati dzikamei maererano nekusiyana. Ikofi munyaya iyi unhu hwakafanana neTassimo.
Superautomatic, ruoko kana kubatanidzwa: zvitatu izvi zvine mhedzisiro yakaenzana. Kofi yakafanana neiyo inowanikwa mu nyanzvi dzemaindasitiri kofi michina, uye nemukana we vaporizer ruoko kuti ugadzire furo yepamusoro yausingakwanise kuwana mu capsules, kana mune mamwe magetsi kana echinyakare.
mamwe magetsi: kuAmerica kana kudonha kofi, kunze kwekusava nyore uye nekukurumidza sezvakapfuura, mugumisiro wekofi wakachena kwazvo, zvichiita kuti zvinonhuwira zvakasiyana uye zvinonaka zviongwe. Pasinei neizvi, vanoda kofi yakanaka havavakoshesi zvakanyanya. Pane kudaro, vanogona kunge vakanaka kune avo vari kutsvaga chimwe chinhu chakachipa, vane rusununguko rwekushandisa chero kofi, uye vanoita yakawanda yekofi panguva imwe chete uye vasingashumiri imwe chete.
Tsika: iyo nzira haina kugadzikana senge mune yapfuura. Iwe unofanirwa kuita maitiro nhanho nhanho nemaoko kusvika wawana mhedzisiro.
Italian: vanokutendera kuti ugadzirire kofi yakanaka nekunhuhwirira kwakanyanya. Iwo zvakare akachipa uye haana kuoma kushandisa, kunyangwe maitiro acho achinonoka. Nekudaro, zvinokutendera kuti ugadzire kapu imwe chete panguva zvichienderana nehukuru.
cone: kana ari iwo echokwadi Cona, mhedzisiro yacho yakanaka kwazvo. Nekuisira kofi patembiricha yakaderera pane dzimwe (inenge 70ºC), izvi zvinoita kuti kofi ichengetedze maitiro ayo e organoleptic zviri nani pane mamwe marudzi.
plunger: Vanogona kupa mhedzisiro yakafanana neyakapfuura. Simba ravo guru nderekuti dzakachipa zvikuru uye dzakanakira vanhu vakura vasingazivi mashandisiro azvino uno kana kuti vasingadi kuomesa upenyu hwavo.
Industriales: kumabhizinesi, kuwana hunyanzvi hwekunakisa uye maumbirwo nekuda kwezvimiro zvavanopa. Dzinodhura uye dzakakura. Aya marudzi emichina ye espresso ibhuku, kunyange zvazvo kunewo ma-super-automatic.
Ndeipi kofi yekutenga?
Zvichienderana nerudzi rwemugadziri wekofi waunoshandisa, iwe uchada imwe kofi kana imwe. Zvichida kunyange mugadziri wako wekofi anotsigira akawanda marudzi ekofi. Mumwe nomumwe wavo ane peculiarities uye tricks. Unoziva here kuti mangani emhando kofi capsules aripo? Chii chakavanzika chekusarudza yakanakisa pasi kofi? uye kana ukatenga coffee beans, kukuya zvakanaka sei?
Kofi accessories: izvo zvakakosha
Nyika yekofi yakakura uye kana iwe uchida ichi chinwiwa haungaregi kushamiswa nehuwandu hwesarudzo dziripo. shandura chiitiko chekofi kuita chimwe chinhu chakasiyana. Kune vakawanda inotova tsika. Nekudaro, pane akati wandei ma accessories anoita seakakosha: mukaka wakaoma kuwana kunaka mune creaminess, kofi grinders nokuda kwekugadzirwa kwakakwana kana thermoses kuchengetedza uye kutakura yako kofi. Buda.
1 Iyo yakanakisa kofi michina pamusika
2 Mhando dzemichina yekofi: ndeipi yakanaka?
2.1 magetsi ekugadzira kofi
2.2 mapoto ekofi echinyakare
2.3 Maindasitiri ekofi michina
3 vanogadzira kofi vanonyanya kutengesa
3.10 Melitta Tarisa Therm Deluxe
4 Nzira yekusarudza muiti wekofi: nhanho nhanho pfupiso
5 Ndeipi kofi yekutenga?
6 Kofi accessories: izvo zvakakosha
Cona kofi michina uye vacuum kofi michina
Bialetti kofi michina
Bosch kofi michina
Bra kofi vagadziri
Cecotec kofi michina
DeLonghi Kofi Vagadziri
Delta Kofi Vagadziri
Dolce Gusto kofi michina
Illy kofi michina
Vagadziri vekofi veJura
Krups kofi michina
Lavazza kofi michina
Melitta kofi michina
MiniMoka vagadziri vekofi
Yakachipa Nespresso kofi michina
Orbegozo kofi michina
Oroley vagadziri kofi
Oster kofi vanogadzira
Philips kofi michina
Saeco kofi michina
Senseo kofi michina
Smeg kofi michina
Vagadziri vekofi yeSolac
Tassimo kofi michina
Ufesa michina yekofi
Mhando dzekofi capsules